Ubongo: Yakavhurika Muchinjikwa -Puratifomu App Yekugadzira | Kubva kuLinux
Pane dzimwe nhambo isu tataura nezve mafomu e kunatsiridza kugadzirwa kwemushandisi padhesiki remakomputa avo. Uye yechinyorwa chanhasi, tichataura zvakare nezvazvo Bongo, inova inonakidza uye inoshanda yakavhurwa sosi uye muchinjiko-chikuva application, inobatsira zvikuru mupfungwa iyoyo.
Kunyanya, Bongo Ndicho Launcher, iyo iri pakati pemabasa mazhinji uye maficha, inotibvumidza kuti tivandudze zviitiko zvedu zvekutsvaga mukati nekunze komputa.
Nguva yatakapedzisira kutaura nezvayo Bongo, in KubvaLinux, yaive iyo January 27 we2017, payanga ichipfuura yakagadzikana vhezheni, nhamba 0.2.3. Mushure meizvozvo, chishandiso ichi chave neshanduko mukusimudzira kwayo kusvika December 5 we2017, payakaburitswa, iyo yazvino vhezheni vhezheni, nhamba 0.3.2.
Mune iwo mukana wekare, isu takatsanangura Bongo akadai se:
"Iyo multiplatform, yakavhurwa sosi chishandiso, yakagadzirwa neiyo elektroni fomati na Alexandr Subbotin, iyo inotibvumidza kuti tiwedzere kugadzirwa kwedu, kuwana tsvagiridzo, ruzivo, karukureta, kunyorera, kuvhara maitiro, pakati pevamwe, kubva kuchimwechete chikumbiro uye kuburikidza nekhibhodi nzira".
Wedzera kugadzirwa paLinux neBongo
Uye yaani mainini yakanangiswa mushandisi kugadzirwa yaive:
Iko kusanganisa kusanganisa kweakawanda mashandiro mune imwechete application.
Iko kugona kwekutsvaga kana kuwana akawanda maapplication nekungobaya mashoma.
Iko kugona kwekutarisa iyo faira sisitimu nekutarisisa kwezviri mukati (mafaera / maforodha).
Inotsigirwa neiyo API ine simba iyo inokutendera iwe kukura uye kuvaka ako wega plugins.
Kurerukirwa kwekuwana uye kushandisa, chero nguva uye kubva chero kupi, nekuda kwekushandisa kwayo kwakapfupika.
1 Cerebro: Vhura uye pamuchinjikwa-chikuva chirongwa chekuita
1.1 Kuisa Cerebro mune yayo yakagadzikana vhezheni 0.3.2
1.1.1 Uchishandisa .Application faira
1.1.2 Uchishandisa .deb faira
1.1.3 Uchishandisa mamwe marekodhi
1.2 Kuiswa bug fixes
1.2.1 Kururamisa Brain Kuuraya
Cerebro: Vhura uye pamuchinjikwa-chikuva chirongwa chekuita
Kuisa Cerebro mune yayo yakagadzikana vhezheni 0.3.2
Maererano ne Yepamutemo webhusaiti yeiyo Brain app, inowanikwa kune vashandisi ve Mahara uye akavhurika mashandiro, senge GNU / Linux, inogoneka sosi faira mune fomati .AppImage, in it 0.3.1 version. Ndichiri mu Yepamutemo webhusaiti yeElectron Technology, muchikamu chayo chekushandisa, pane chikamu che Bongo, iine kuwanikwa kwemafaira enzvimbo emafaira .AppImage y .deb, asi mune rake 0.3.2 version. Ichi chishandiso chine zvakare saiti pa GitHub.
Uchishandisa .Application faira
Kuisa Bongo uchishandisa iyi yekumisikidza fomati uye mushure mekurodha pasi iyo faira, chete inotevera mirairo yekuraira inofanira kuitiswa:
Uchishandisa .deb faira
Uchishandisa mamwe marekodhi
Kune avo vanoda gadza kunyorera kuburikidza nechengetedzo, inogona kushandisa imwe nzira, iyo inosanganisira kurodha pasi zvinotevera .deb faira izvo zvichaisa iyo zviripo zvinyorwa yeiyo webhusaiti, inonzi Dhadha JAD - Repository. Mushure meizvozvo, isu tinoenderera mberi nekuisa iyo kurodha pasuru uye kushanda kwacho Bongo kuita mirairo inotevera yekuraira:
Mushure mekunge application yaiswa Bongo, neimwe nzira, isu tinongo fanirwa kuzviita kekutanga kubva ku Kutanga Menyu / Chishongedzo Chikamu, igadzirise kune zvatinoda, uye ndoda kutangazve komputa zvachose, kuti iongorore mashandiro ayo kubva pakutanga.
Kuiswa bug fixes
Vamwe vashandisi vanogona kutaura chikumbiro kuuraya kutadzandiko kuti, kusaitwa kweiyo graphical interface Bongo. Mune zvimwe zviitiko, iyi ndiyo mhinduro ingangodaro:
Vhura midzi yemidzi uye ita zvinotevera mirairo uye shanduko:
Mune zvirimo mufaira chinja kukosha kweparamende "trackingEnabled" de True kubudikidza False. Sevha shanduko uye edza chaiyo kuurayiwa kwe Ubongo.
Yekupedzisira faira yezvinyorwa config.json
Ona zvimwe zveiyi mhinduro mune inotevera link.
Kururamisa Brain Kuuraya
Kana iyi iri mhinduro, iyo mune yangu yakashanda zvinogutsa pa Zvishamiso 2.0, iri kunyanyisa kugadzirisa uye kugadzirisa kwe MX Linux 19, inovawo yakavakirwa pa DHEBHANI 10, yaizoitwa ichideredzwa pamwe ne icon pabhara rebasa, uye painourayiwa yaizoita seinotevera:
Kubva ikozvino zvichienda mberi, zvinongoramba zviripo kudzidza mashandisiro Bongo, uye isa mamwe plugins zviripo kana dzidza kugadzira yako, ku wedzera kugadzirwa kweichi chishandiso paGNU / Linux.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" about «Cerebro», inova inonakidza uye inoshanda yakavhurwa sosi uye muchinjiko-chikuva application, inobatsira zvakanyanya kugadzirisa kugadzirwa kwedu pamatafura emakomputa edu; kuva zvakawanda kufarira uye kushandiswa, Zvese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Ubongo: Yakavhurika Muchinjikwa -Puratifomu App Yekugadzira
Yakagadziridzwa nguva pfupi yadarika here? Ndakaiyedza panguva iyoyo ndichitsvaga chinotsiva QuickSilver (QS) isiri muGNU / Linux asi chokwadi ndechekuti ini handirangarire kuti sei ndakarasa chokwadi. Parizvino ini ndinoshandisa Kupfer, haina kukwana, asi yakanaka kune yakakosha mashandisiro andinoishandisa inozadzisa:
- Kopa mafaira ekufambisa
- Dzorerazve mafaera
- Gadzira uye famba kuburikidza akasiyana maforodha uye zvishandiso
Ichave iine zvakawanda zvechokwadi (iine plugins) asi hei ndiwo sarudzo andinonyanya kushandisa, uye sezvo iine interface yakafanana neiya yeQS inoita kuti ndijairane.
Pindura kune arazal
Yayo yekupedzisira yekuvandudza, sekutaura kwechinyorwa, yaive "muna Zvita 5, 2017, apo yazvino vhezheni vhezheni, nhamba 0.3.2, payakabudiswa." Nekudaro, inoshanda mushe uye ine yakanakisa yekuwedzera-ma (plugins) ayo anoichengeta ichishanda kwazvo Uye zvakare, iyo inokutendera iwe kuti uise matsva mapulagi akagadzirwa neavo vane programming ruzivo. Kana iwe uchida kudzidza zvishoma nezve Cerebro, ini ndinokurudzira inotevera kupinda, yechipiri ye3, nezvayo. Mukutanga ini ndinotsanangura nzira dzakasiyana dzekumisikidza, mune yechipiri kumisikidzwa uye kushandiswa, uye munguva yechitatu neyekupedzisira, kubatwa kwezvimwe zvinowedzera zvinowedzera.
Chokwadi, mune ramangwana zvinyorwa ini ndichataura nezve dzimwe nzira dzeCerebro saKupfer naAlbert.
chirongwa chakafa, heino imwe nzira.
Kwazisai Walter! Mune ino ichangoburwa posvo ( https://blog.desdelinux.net/albert-kupfer-excelentes-aplicaciones-alternativas-cerebro-productividad/ Takakurudzira Ulauncher asi kwete sekutsiva Brain asi semubatsiri, nekuti Ulauncher inoshandisa yakawanda RAM memory zviwanikwa. Ini ndinokurudzira kuishandisa pasina kuwedzeredzwa pamwe neCerebro.